Ahoana no mifidy ny palitao lehilahy ao amin'ny fivarotana an-tserasera?
ianao eto: Home Tips Ahoana no mifidy ny palitao lehilahy ao amin'ny fivarotana an-tserasera?
Tonga lafatra nipetraka teo ny tarehimarika, stylish ny palitao lehilahy - ny modeling ao amin 'ny endriky ny olona, izay maneho fomba manokana, sata ara-tsosialy, ary koa ny tahan'ny fahombiazana ny olona. Rehefa mividy ny palitao dia ilaina ny manakiana hijery ny toetra lehibe - tsipika Silhouette, tafatontona teo amin'ny ny tarehimarika, toetra ara-nofo sy ny mari-pahaizana fampiononana in anaovan'ireo.
Mividy palitao tao amin'ny magazay ny mety, mankasitraka ny fandinihana ao amin'ny efitrano fisoloana akanjo fitaratra, mora. Na izany aza, ny hamafin'ny ny gadona fiainana sy ny tsy fisian'ny fotoana tsy tapaka, ny olona ankehitriny, Matetika kokoa dia mitarika ho amin'ny filàna iray ny olona mba hividy palitao tao amin'ny fivarotana an-tserasera, izay ny fahafahana ary miezaka eo manombatombana ny vokatra dia tsy.
Online fivarotana palitao
Ahoana no mifidy ny palitao tao amin'ny toeram-pivarotana?
Ny fitsipika endrika, mety latabatra amin'ny lafiny fitsipika, mividy palitao tao amin'ny fivarotana an-tserasera dia mora. Fa raha mandoa be dia be ny tsara ny fampiofanana ao amin'ny efitra Fitness, na manana fironana ho lanja be loatra, sy ny masontsivana hihataka amin 'ny fitsipika fanoharana izany fitomboana, manontolo, na proportionality, Selection palitao sarotra sy tsy ho diso hevitra ny voafantina modely, dia mila mandinika tsara ny tsipiriany rehetra momba ny vokatra sy ny vaovao momba izany.
Ahoana no mifidy ny fivarotana an-tserasera palitao:
tokony hatao manomboka amin'ny safidy ny fanasokajiana vokatra. Ny irina fikarohana voafaritra masontsivana, dia afaka manafaka ny tenanao amin'ny fomba fijery dia tsy ho ho ny toerana mahaliana, mifantoka amin'ny vokatra ireo, fa ho hihaona ny fepetra takiana;
mifidy ny toerana tena modely sy ny loko palitao, mianatra mba sarintany ny harato amin'ny lafiny entana, izay toa angon-drakitra fototra entana (habeny / fitomboana);
Vakio tsara ny sary ny palitao, fifidianana, araka izay mipetraka eo amin'ny mannequin na modely.
Manaova mba raha tsy aorian'ny, ahoana no hinoanareo, fa masontsivana rehetra sy ny kalitaon'ny vokatra mba hitsena ny fepetra takiana.
Mety handresy lahatra anao mba hividy ny fiarovana
Mba noho ny fividianana an-tserasera dia azo antoka, Ihany no mividy palitao tao amin'ny fivarotana an-tserasera azo antoka, izay mihevitra feon'ny fieritreretany mpivarotra ny mpividy miantoka ny fitandremana ny zony sy manome ny ambony indrindra habetsaky ny momba ny vokatra.
Ahoana no mba hahazoana antoka ny tsy fivadihan'ny ny mpivarotra? Halalino tsara ny fivarotana toerana. Feon'ny fieritreretany mpivarotra mametraka ny entany ao an-karatra ho an'ny mpividy:
dimy, fara fahakeliny, vokatra sary amin'ny lafiny samy hafa - ao ny fahanginan amin'ny toerana telo (eo anoloan'ny, azy tsy hiala, avy any aoriana), karazana ny hetsika, buttoned sy unbuttoned teny, sary mampiseho ny ao anatiny ny palitao;
sary fanampiny, mampiseho ny fipetrahana ny palitao ao amin'ny tena sock, ary koa ny sary amin'ny Accessories, mba ho afaka sary an-tsaina ny endriky ny hoavy;
mampihahaka ny endriky ny sela santionany, izay dia nozairina palitao, mba ho afaka hijery ny toetra sy ny mihasimba, loko sy ny lamba pirinty;
Mampiseho sary velona modely, izay dia ahafahana hijery tsy miangatra ny, ny vokatra mitovy amin'ny zava-misy.
Toy ny feon'ny fieritreretany mpivarotra ao amin'ny fivarotana ny mametraka tranonkala ho an'ny mpanjifa amin'ny lafiny fanohanana ny Grid, izay afaka mahita fanazavana fanampiny momba ny vokatra, amin'ny fanajana ny tsirairay habeny:
palitao halavan'ny avy any an-tampon'ny vavahady teo amin'ny sisin'ny gorodona,
palitao soroka sakany,
Halavan'ny tanany avy amin'ny armhole ho any ambanin'ny sisin'ny.
Io latabatra dia ahafahana mamaritra ny marina marina haben'ny ny palitao sy marina tsara ny hividy azy io ao amin'ny fivarotana an-tserasera.
Ohatra tsara dia tsara araka ny tokony ho voalamina ny fivarotana ny fitafian'ny olona amin'ny alalan'ny fitaovana an-tserasera, Izany dia mampiseho ny toerana «SVYATNYH» - orinasa, izay amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo tsara indrindra mpanamboatra akanjo ho an'ny lehilahy, anisan'izany ny akanjo ho an'ny ankizilahy. Ao amin'ny fivarotana an-tserasera ny orinasa ho an'ny mpanjifa mba hamoronana fitaovana mety, miaraka amin'ny fanasokajiana, mifidy sy hijery ny vokatra. Tsirairay dia ahitana zavatra be dia be ny portfolio-, Tsy fihetsiketsehana fotsiny ihany ny vokatra, fa ny entam-barotra mpanamboatra etikety, izay nanondro ny tahirin-kevitra amin'ny lafiny.
Ahoana no mifidy ny Monitor?
Veneers fanitsiana nify
Iza no tsara kokoa ny mividy inflatable kidoro